सोमबार सार्वजनिक हुँदै सामसुङका दुई नयाँ स्मार्टफोन, यी हुन् मुख्य विशेषता
काठमाडौं । सामसुङले सोमबारदेखि सुरु हुने विश्व मोबाइल सम्मेलनमा यो वर्षको आफ्नो फ्ल्यागशिप लन्च गर्दै छ । कम्पनीले ग्यालेक्सी एस९ र ग्यालेक्सी एस९प्लस स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको हो । यो स्मार्टफोन आगामी मार्चदेखि बजारमा आउनेछ ।
प्रविधि क्षेत्रकै ठूलो परियोजना इभेन्टमा भविष्यमा आउने प्रविधिको जानकारी तथा नयाँ स्मार्टफोन पनि लन्च गर्ने गरिन्छ । सामसुङले आफ्नो दुई नयाँ स्मार्टफोनमा ड्युल अपर्चर सिष्टम दिनेछ । यद्यपि यसको बारेमा जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
लन्च हुनुभन्दा पहिला नै सामसुङ ग्यालेक्सी एस९प्लस को सूचना लिक भएको थियो । त्यसमा दुवै क्यामरा १२ मेगापिक्सलको हुनेछ । जब कि सामसुङ ग्यालेक्सी एस९ स्मार्टफोनमा सिंगल १२ मेगापिक्सल क्यामरा हुनेछ ।
लिक भएको जानकारीअनुसार सामसुङ ग्यालेक्सी एस९मा ५.८ इन्चको इन्फिनिटी डिस्प्ले, तथा एस९प्लसमा ६.२ इन्चको इन्फिनिटी डिस्प्ले हुनेछ । एस९ सिरिज स्मार्टफोनमा सामसुङ आईफोन १० को एनिमोजी जस्तै फिचर दिनसक्ने मानिएको छ ।
बैंकको क्रेडिट कार्ड देखाउनुहोस्, शून्य ब्याज र किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोन लैजानुहोस्
काठमाडौं । एक रुपैयाँमा नै मोबाइल फोन ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी ईजी मोबाइल केयर प्रा.लि.ले दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसर पारेर बैंकका क्रेडिट कार्ड भएका ग्राहकहरुका लागि फेष्टिवल
फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन कसको पहिला ? सामसुङलाई उछिन्ने दाउमा हुवावे !
एक रिपोर्टका अनुसार स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरुबीच फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन ल्याउन प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सामसुङले यस्तो फोन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता हुवावेले त्यसअघि नै फोल्ड
ओपोले नेपालमा मिड रेञ्ज एथ्रीएस स्मार्टफोन ल्याउदै
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट, ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ मिड–रेञ्ज स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले सुपर फुल नोच स्क्रिन सहित ६.२ ईञ्च स्क्रिन भएको एथ्रीएस सार्वजनिक गर्न लागेको हो
ह्वावेको स्मार्टफोन नोभा ३ र नोभा थ्री आई नेपाली बजारमा
काठमाण्डौँ। चिनियाँ फोन उत्पादक कम्पनी हुवाईेको नोभा सिरिजअन्तर्गतका पछिल्ला स्मार्टफोनहरू -नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएका छन्। एक भव्य समारोहबीच संचारकर्मीहरू तथा सेलिब्रेटीहरूको उपस्थितिमा नोभा थ्री तथा